Ụbọchị My Pet » Mgbe bụ "Right Time" Iji na-agbaso A New Mmekọrịta?
emelitere ikpeazụ: Jan. 19 2021 | 3 min agụ
Ndakpọ bụ siri ike. N'agbanyeghị onye-eweta mmekọrịta ma ọ bụ ya mere o ji biri, ọ pụrụ ịbụ ihe oge mmetụta uche na-esonụ na njedebe nke a ediomi. Ya mere, ị ga-ahụ onwe otu ugboro dum mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụwa nwere ike na-eche a bit akarị na mbụ.
E nwere ụfọdụ i nwere ike na-eche mgbe ị kwesịrị ị na-amalite amalite na-akpa ọzọ na mwute, na e nweghị ngwọta dị mfe nye nsogbu a. Everyone deals with breakups at their own pace so there is no specific timeline to follow in regard to pursuing a new relationship after a breakup.
Ya mere ị dị njikere na-amalite a mmekọrịta ọhụrụ, ka naanị mmalite mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? Ebe a na-a ole na ole Atụmatụ inyere gị aka ịmata ma ọ bụrụ na ị bụ na ụzọ nke ziri ezi:
Nye onwe gị oge
M na-etinyecha ụgha-ndakpọ inu. You might want to curl up into the fetal position on your couch with a pint of ice cream and Netflix for the company for a while. Iwepụta oge na-eru uju na njedebe nke a mmekọrịta nkịtị. Mgbe ọ na-abịa arọ mmetụta ndị dị ka obi mgbawa, o nwere ike ime ihe ụfọdụ oge ịgwọ agwọ gị ọnyá. Ịnagide na a gbasaa na a ike na tozuru okè n'ụzọ bụ ụzọ kasị mma obibi na-aga n'ihu na ndụ gị.
Na-arụ ọrụ gị onwe gị
Ọtụtụ mgbe, mgbe mmekọrịta akwụsị na ị na-ekpe ajụjụ ihe niile. Gịnị na-ezighị ezi? Ọ bụ na ọ m kpatara? Olee ihe m pụrụ mere dị iche iche? Kwụsị ahụhụ onwe gị n'ihi na gị okpu mmekọrịta na-akwụsị na-akpọ ụta egwuregwu, dị ka ọ na-agaghị na-eme ka ị na-eche ihe ọ bụla mma. Ịnakwere na mmekọrịta na-arụ ọrụ ma na-adịghị egbu na mmetụta nke ụta ga-enyere gị ịga na na. Ịmụta si emehie bụ ụzọ kasị mma mara ihe ị chọrọ a mmekọrịta na ihe ị na-eme adịghị.
Were oge a na-agbalị ka mma onwe gị na-agbalị ihe ọhụrụ. Mgbe nwere ihe omume ntụrụndụ i nwere mmasị ma mgbe gbalịrị? Now is a perfect time! Were a asụsụ N'ezie, volunteer at a charity event, or even run a marathon. The nhọrọ-adịghị agwụ agwụ. Try something new that makes you happy and just focus on yourself.
Bee niile ihunanya agbatị na gị bụbu
Ụfọdụ ndị na-enwe ike ịnọgide na enyi mgbe a gbasaa, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ na ị dị nnọọ ike inwe ha na ịnọgide na-agbalị na-arụ ọrụ ihe, ị pụrụ bee niile na kọntaktị na ha, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ nanị ruo nwa oge. Ọ bụ ike ịkwaga na mgbe ị na-enye onwe gị ụgha olileanya na e nwere ohere ka ịtụte mmekọrịta. E nwere mgbe e mesịrị ala n'okporo ụzọ na-enyi, ma mgbe gbasaa bụ ka ọhụrụ n'uche gị, ọ pụrụ ịbụ nnọọ mfe ka ị na-anya.
Zere atụ ụjọ rebound
The rebound mmekọrịta paradigm bụ a àgwà na kwesịrị-agbaji ozugbo. Ị pụrụ ịgwa onwe gị mmekọrịta a na-agaghị a ahụkarị rebound, ma ọ nwere ike si otú ahụ na agbanyeghị, n'agbanyeghị mgbalị kasị mma i. Ị ka nwere ike na-ajụ gị na ikpeazụ mmekọrịta na ndị niile na arọ mmetụta aka, ya mere, ọ pụrụ ịghọ mgbagwoju anya site na-eweta ndị agadi obi n'ime ọhụrụ mmekọrịta.
Mgbe ọ na-abịa rebound flings (I.E. enwe mmekọahụ na random mmekọ, enyi nwere elele, wdg), ha kwesịrị nnọọ izere. A ngwa hookup nwere ike iyi ka a ezi echiche, ma ha dị nnọọ na-adịghị. Iji mmekọahụ nkịtị dị ka n'ọnụ mmetụta na-erughị owu na-ama mgbe a gbasaa nēche nwere ndị na-abụghị mmetụta; ị ga-ihe karịrị yiri na-eche nnọọ njọ mgbe ihe niile e kwuru na-eme. Zọpụta onwe gị mmezi obi mgbawa ma na-agafe na rebound mmekọrịta / flings.
Ị n'ezie njikere ịga n'ihu
Mgbe ị na-agaghịkwa enwe na-egbu oge mmetụta nke ịhụnanya na ọnwụ kwupụta gị bụbu, akwụsịwo obsessively ịlele ha Facebook page (adịghị hà i nwere adịghị), ma kwụsị na-enye onwe gị na-atụ anya ná mma gị nwere ike ịdị njikere ịga n'ihu.
Unu na-ege ntị ndị nọ na gburugburu gị onye na-agwa gị mgbe ị kwesịrị ị na-amalite na-akpa ọzọ n'ihi na mkpebi bụ n'ikpeazụ gị. Mgbe ị na-akpatre eche njikere izute onye ọhụrụ bụ mgbe ị kwesịrị ị na-amalite mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. This is your life, ka emechara, so don’t try to appease your friends and family by hopping back into the dating game when you are just not ready yet.